U dirista lacag Morocco – Transfer Galaxy
Waddamada caanka ah
U dirista lacag Morocco
Waa maxay wakhtiyada bixinta?
- Qaadashada lacagta caddaanka ah / kaashka ah: Waxaa lagu qaadan karaa muddo ilbiriqsiyo dhexdooda
Waa maxay qiimaha ugu yaraan iyo ugu badnaan ee lacag wareejintii ba / xawaalad diridii ba?
Iyada oo ay qiimaha lacagta ku kala duwanaan karto iyada oo ku xiran meesha iyo sida aad u direyso waxaan kugula talineynaa in aad ka hubiso xaddidaantaa naftaada xisaabiyaha bogga hore. Si aad u eegto xadka lacag wareejin / xawaalad dir gaar ah, waxaad gelisaa inta aad rabto inaad dirto xisaabiyaha. Wuxuu kuu sheegi doonaa haddii aad ka hooseeyso xaddiga ugu yar ama ka badan tahay inta ugu badan.
Xagee baan ka qaadan karaa lacagtayda?
Lacagta caddaanka ah / kaashka ah waxaa laga qaadan karaa isla markiiba laan walba ee CanalM.
Halkan riix si aad u hesho liis dhamaystiran ee dhammaan laamaha.
Macluumaadka muhiim ah in la ogaado
Fadlan ogow waxaa jiri kara xaaladdo ka baxsan awooda Transfer Galaxy ee saameyn karta lacad wareejinta / xawaalad dirida, sida dhibaato ah xagga korontada, isgaarsiinta, xiriirka internetka iwm. Haddii aan la kulanto dhibaatooyin, fadlan la xiriir kooxda Taageerida Macaamiisha.